प्रदेश खबर – Page 319 – दाङ खबर
May152018 by DangkhabarNo Comments
रुपन्देहीमा मोवाइल पसल चोरी रोकिएन, दुई वर्षमा १० पसलमा २ करोडको चोरी
बुटवल, जेठ १ । रुपन्देहीका मोवाइल ब्यबसायी असुरक्षित बन्दै गएका छन् । जिल्लाको तथ्यांक हेर्दा २ वर्षभित्रमा २ करोड भन्दाबढी मूल्यका मोबाइल चोरी भएका छन् भने १० वटा पसलमा तोडफोड र चोरी भएको छ । बुटवल र भैरहवा क्षेत्रबाट मात्रै २ करोडबढीको मोवाइल चोरी भएको हो । श्रृंखलाबद्ध रुपमा भएको मोवाइल पसल चोरीका कारण मोवाइल ब्यवसायिहरु असुरक्षित बन्दै गएका छन् भने उनीहरु ब्यबसायबाट नै पलायनको स्थितीमा पुग्ने मनस्थितीमा पुगेका छन् । ‘बुटवल बजारमा रहेका मोवाइल पसलमा महिनै पिच्छे चोरीका घटना भैरहेका छन्, हामीले प्रहरी प्रशासनलाई कोड जानकारी दिँदा पनि कुनै चोर पक्रिएको र कारबाही भएको छैन ।’ बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ मोवाइल बस्तुगत समितिका सभापति विष्णु ज्ञवालीले भने । बुटवल र भैरहवा क्षेत्रका गणेश इलेक्ट्रोनिक, श्री आर एस, आरएस मोवाइल बजार, एटुजेड मोवाइल, सचिन मोवाइल, विशाल मोवाइल, सिद्धबाबा इन्फो
दाङ, जेठ १ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको ३०औँ बैठकले विभिन्न विधेयक र कार्यविधिहरु पारित गरेको छ । नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले सहकारी विधेयक २०७५, न्यायिक समितिको कार्यविधि नियमित गर्न बनेको विधेयक २०७५, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रशासन नियमित गर्न बनेको विधेयक २०७५ र राजपत्र प्रकाशन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लगायतका ऐन तथा कार्यविधिहरु पारित गरेको हो । कार्यपालिकाको बैठकले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको कक्षा थप र स्थानान्तरणका लागि प्राप्त निवेदनउपर छलफल गरेर शिक्षा शाखा तुलसीपुरले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित सदर गरेको छ । प्रतिवेदनमा थप एक कक्षा सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका विद्यालयले वडा कार्यालयको सिफारिस, नजिकको विद्यालयको सहमति र भौतिक पूर्वाधारको विवरण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । माथिल्लो कक्षा म
रेसुङ्गा विमानस्थलमा प्राधिकरणको टोली पुग्यो, जेठ २० गतेभित्र परीक्षण उडानको तयारी
रुपन्देही, जेठ १ । निर्माणाधिन गुल्मी स्थित रेसुङ्गा विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने अन्तिम चरणको तयारी अवलोकन गर्न नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणको उच्च टोली गुल्मी पुगेको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक संजिव गौतम निर्देशक ध्रुवदास भोछिभय, गौतम बुद्ध विमान स्थल भैरहवाका निर्देशक तेजराज पोखरेल, विमानस्थल आयोजना प्रमुख ओम शर्मा लगायतको टोलीले विमानस्थल अवलोकन गरेका हुन्। जेठको पहिलो साता परिक्षण उडान गर्ने चर्चा चलिरहेको बेला आएको टोलीले ग्यावीङ्ग वाल लगातका संरचनाहरु पुरा गर्न सुझाव दिएको छ । अवलोकन टोलीको सुझाव पछि निर्माण समितिको बैठक बसेर २० गते भित्रमा परिक्षण उडानको तयारी गरिएको समितिका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले बताए । उनका अनुसार थप अन्तिम तयारीको अवलोकन गर्न विमान परिक्षण उडान कम्पनीका पाईलट लगायको टोली आउने छ । १८ सिट भएको विमान दैनिक ३६ जना आवत जावत गर्ने यात्रु पुगे नियमित उडान
दाङमा आलुको मूल्य बढ्यो
तुलसीपुर, जेठ १ । दाङमा आलुको मूल्य बढेको छ । दाङमा आलु मनग्य मात्रामा उत्पादन हुने भएपछि उत्पादित आलुलाई भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्द्र नहुँदा भारतीय आलु खानुपर्ने बाध्यता रहदै आएको छ । त्यसैले पनि यहाँका उपभोक्ताहरु चर्को मूलयको मारमा पर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतबाट ढुवानी गरेर ल्याउदा नै महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तुलसीपुर क्षेत्रमा क्रियाशील ब्यबसायीले गुनासो गरेका छन् । अहिले दाङका बजारमा खपत हुने गरेको आलुको मूल्य भारतले नै निर्धारण गर्ने गरेको उनले बताए । भारतबाट आउदा ढुवानी खर्च सहित आलुको माग अनुसार आलुको मूल्य निर्धारण हुन्छ । पछिल्लो समय दाङका बाजारमा आलुको मूल्य बृद्धि भएको छ । एक हप्ता अघि थोकमा आलुको थोक मूल्य किलोको २० र फुटकर को ३० रुपैँया थियो । तर अहिले बढेर थोकमा किलोको ३० र फुटरमा किलोको ४० रुपैँया भएको अध्यक्ष खड्काले बताए । साथै एक हप्ता अघि एक सय
घोराहीमा पानी भण्डारणका लागि दर्जन बढी कृत्रिम जलाशय निर्माण
दाङ, जेठ १ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र विभिन्न स्थानमा एक दर्जन बढी कृत्रिम जलाशय निर्माण गरेको छ। पानीको स्रोत बढाउन र कृषकको आय आर्जनमा टेवा पुर्‍याउने उद्धेश्यले कृत्रिम जलाशय निर्माण गरिएको मेयर नरुलाल चौधरीले बताए। घोराही क्षेत्रमा पानीको मुहान क्रमश सुक्दै जान थालेपछि पानी रिचार्ज गर्न कृत्रिम जलाशय निर्माणमा जोड दिइएको मेयर चौधरीको भनाइ छ। ‘जनघनत्व बढ्दै जानु तथा सहरी क्षेत्र विस्तार हुदै जाँदा पानीका मुहानहरू सुक्दै जान थाले र पानीको अभाव बढ्न थाल्यो। घोराही क्षेत्रको भविष्य अन्यौलमा नपरोस् भनेर कृत्रिम जलाशय निर्माणमा लागेको हौं,’ मेयर चौधरीले भने। घोराही उपमहानगरले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब दुई करोड रुपैयाँ कृत्रिम जलाशय निर्माणको लागि खर्च गरिरहेको उनले बताए । उनले नयाँ कृत्रिम जलाशय निर्माणदेखि पहिलेका पानी पोखरी, दह तथा ताल तलैयाहरूको मर्मत गरी
रोल्पा छुट्टाछुट्टै स्थानमा आगलागीबाट लाखौको धनमाल जलेर नष्ट
रोल्पा, जेठ १ । रोल्पाका दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा भएको आगलागीबाट लाखौँको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ । आगलागीबाट चार परिवार घरवारविहीन हुन पुगेका छन् । त्रिवेणी गाउँपालिका–४ जुगारमा आइतबार बेलुका भएको आगलागीमा परी तीन घर जलेर नष्ट भएका छन् । स्थानीय हरि परियारको गोठबाट सल्केको आगोले हरि परियार, रमेश परियार र नन्दबहादुर पुनको घर जलेर नष्ट भएको प्रहरीले बताएको छ । सो आगलागीबाट रु १० लाख बढीको क्षति भएको बताइएको छ । प्रहरी र स्थानीयवासीको सक्रियतामा आगो नियन्त्रणमा आएकाले थप क्षति हुन नपाएको प्रहरीले बताएको छ । उता रोल्पा नगरपालिका–७ माडीचौरमा समेत एक घर आगलागी हुँदा रु १० लाख बढीको क्षति भएको थियो । स्थानीय वर्मता पुनको कच्ची घरमा भएको आगलागीबाट अन्न, लत्ताकपडा, काठपातसमेतको धनमाल जलेर नष्ट भएको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरी र स्थानीयवासीको सक्रियतामा आगो नियन्त्रणमा आएकाले थप क्षति हुन नपा
माटोको अभावले कुमालको पेशा खोसियो
पाल्पा, जेठ १ । माटोका भाँडा बनाउन आवश्यक पर्ने माटो गाउँमा पाइन छाडेपछि कुमाल समुदायको पेशा नै खोसिन पुगेको छ । पुस्तौँदेखि माटोको भाडा बनाएर जीवन धान्दै आएका पाल्पा रामपुर नगरपालिका–६ मा बसोबास गर्ने कुमाल समुदाय गाउँमा माटो पाइन छाडेपछि पेशा नै खोसिन पुगेकोमा चिन्तित बनेका छन् । दुर्गादेवी कुमालले जानेबुझेदेखि नै माटोको भाडा बनाएर बेच्ने गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैबाट उहाँको घरखर्च चलेको थियो । अहिले माटो निकाल्ने ठाउँ नै नपाएपछि उहाँलाई दिन बिताउनै समस्या परेको छ । “सानैदेखि माटोका भाडा बनाएर गाउँगाउँमा बेच्न लगिन्थ्यो, त्यसैबाट साँझ बिहानको गुजारा चलेकै थियो”– “माटो झिक्ने ठाउँ नहँुदा गर्दैआएको पेशा नै खोसियो” उहाँले भन्नुभयो । पुस्तौदेखि गर्दै आएको पेशा खोसिन पुग्दा धेरैको रोजीरोटी गुमेको छ । सार्वजनिक जग्गामा माटो निकाल्न रोक लगाएपछि माटोको भाडा बनाउने पेशा संकटमा परेको ७५ वर्षीय
अबिरल वर्षा र हावाहुरीले दाङमा ठूलो क्षति (क्षति विवरण सहित)
दाङ, जेठ १ । हावा हुरीसँगै परेको अविरल वर्षपछि दाङमा ठूलो क्षेति भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले आइतबार रातिको अविरल वर्षा र हावाहुरीबाट जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ठूलो क्षति भएको जनाएको छ । क्षति विवरण १. बबइ गाउपालिका पुर्व हापुरे १) ऐ.ऐ. बस्ने पूर्ण ब. वलीको राईस मिलको टिनको छानो उडाई ५ लाख बराबरको क्षती भएको । २) ऐ.ऐ. बस्ने बिर बहादुर गाहामगरको टिनले छाएको घरको छानो उडाइ १ लाख ५० हजार बराबरको क्षती भएको ३) ऐ.ऐ. बस्ने भुमिका बि.क. को खरले छायको घरको छानो उडाई १ लाख बराबरको क्षती भएको । ४) ऐ. बस्ने सोम ब. सोमैको टाएलले छाएको घरको छानो उडाई २ लाख बराबरको क्षती भएको । ५) ऐ. बस्ने हरी ब.वलीको टिनले छाएको घरको छानो उडाई २ लाख बराबरको क्षती भएको। ६) ऐ. बस्ने शेर ब. खत्रीको राइस मिलको टिनक छानो उडाइ ५ लाख बराबरको क्षती भएको । ७) ऐ. ३ हंसपुर स्थित श्री जनता उमावि हंसपुर
अस्वभाविक सुविधा बढाएपछि प्रदेश ५ ले विधेयक फिर्ता लियाे
बुटवल, जेठ १-स्थानीय तहले थेग्न कठिन हुने सेवा सुविधा तोकिएपछि सरकारले विधायन समितिबाट पारित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई फिर्ता गरेको छ। अघिल्लो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा विधायन समितिले तलबमान वृद्धिसहितको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा नगरपालिकाका वडा सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई मासिक तलब नभइ भत्ता मात्रै तोकिएको थियो। झण्डै एक महिनाको छलफलपछि विधायन समितिले वडा सदस्यको समेत मासिक तलब तोकी अन्य पादाधिकारीको सुविधा बढाउँदै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सर्वसम्मतिबाट पारित प्रतिवेदनलाई सरकारले फिर्ता पठाएको हो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहले सेवा सुविधामै सबै बजेट खर्च गर्ने स्थिति आउन दिन नहुने बताए। ‘तराई र पहाडी जिल्लाका तहको आम्दानीको स्रोत निकै फरक छ, मुख्यमन्त्री पोखरेल
महिला हिंसामा कमि
यमकला भुसाल तुलसीपुर, बैशाख ३१ । चालु आर्थिक वर्षमा तुलसीपुर क्षेत्रमा महिला हिसांका घटनामा कमि आएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख एवं डिएसपी प्रकाश सापकोटाले चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को वितेको १० महिनाको अवधिमा ३९ वटा घरेलु तथा सामाजिक हिसांका घटनाहरु दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । उहाका अनुसार यो तथ्याङ्क अघिल्लो आर्थिक बर्षको भन्दा कम हो । उहाले २८ वटा घरेलु हिसांका घटनाहरु दर्ता भएको तथा ११ वटा सामाजिक हिसांका घटनाहरु प्रहरीमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार साउन महिनामा एउटा पनि घटना दर्ता भएका छैनन् । भदौ महिनामा दुईवटा घरेलु हिसांका मुद्दाहरु दर्ता भएका थिए । त्यस्तै असोज महिनामा एउटा मात्रै सामाजिक हिसांको मुद्दा र कार्तिक महिनामा पनि एउटा मात्रै घरेलु हिसांको मुद्दा दर्ता भएको छ । ईप्रकाको तथ्याङ्क अनुसार माघ महिनामा नौं वटा घरेलु र नौं वट